Fampiharana Mac handinihana sy hanatsarana ny famantarana Wi-Fi | Avy amin'ny mac aho
Tsy mandeha ve ny tamba-jotra Wi-Fi anao? Ny rindranasa amin'ny Mac anao dia manampy anao hahita ny vahaolana
Javier Porcar | | OS X El Capitan, Tutorials
Mipetraka amin'ny tanàn-dehibe, mety manana olana Wi-Fi ianao, nanomboka tamin'izay ny faritra mahazatra indrindra 2.4 Ghz dia manomboka mahavoky ary ny fantsona 13 izay anohanany dia tsy ampy raha misy marika Wi-Fi marobe.
Avy eo, Router iray miasa amin'ny haavo 5 Ghz na iray tsara kokoa izay mitambatra amin'ny roa tonta dia mety ho vahaolana. Na izany na tsy izany, tsy mandany vola ny MAC raha mandinika ny tambajotranay. Ho an'ity dia manana a Fandaharana Diagnostika mifangaro ao amin'ny Mac OS X.
Na dia misy programa manao zavatra mitovy amin'ny mpandray anjara mavitrika aza ankehitriny, ny Wireless Diagnostics dia manome anao izany fampahalalana izany ihany koa amin'ity fampianarana ity dia hasehoko anao ny fomba fandikana azy.
Toy ny mahazatra, ny fampandehanana azy dia mora toy ny fampiasana Spotlight (Habaka CMD +) na ny programa ataontsika handefasana rindranasa. Manoratra izahay avy eo: Diagnostika tsy misy tariby. Ny varavarankely toa ilay aseho etsy ambany dia mandray antsika.
Raha manohy hatrany isika dia ho tanterahina ny aretina. Hahita efijery miaraka aminay isika Fampahalalana fototra momba ny Router na Modem, ny maody Wi-Fi, ny tarika misy antsika ary ny Channel. SAINGY ny angona mifandraika amin'izany dia: haavon'ny tabataba sy RSSI. Amin'ity fampahalalana ity dia azontsika atao ny mamakafaka:
Signal Type 2.4 Ghz na 5 Ghz: Mitranga izany matetika Diagnostika tsy misy tariby mamakafaka ny famantarana 2.4 Ghz. rehefa nieritreritra izahay fa miasa amin'ny tarika 5 Ghz. Amin'ny ankapobeny dia ampy ny manakaiky kokoa ny router hanovana ilay fanovana. Ny tarika 2.4 Ghz dia manome sakany betsaka kokoa, raha ny tarika 5 Ghz kosa manome haingana kokoa, indrindra noho ny tsy fanelingelenana.
Lafiny iray lehibe hafa koa ny Tahan'ny TX: mametraka ny hafainganam-pandeha azo atao ambony indrindra amin'ny Router na Modem. Raha ohatra ka manana tahan'ny 100 Mb isika dia tsy hahatratra hafainganam-pandeha amin'ireo fitaovana ireo, ohatra, 300 Mb.
RSSI: Mamaritra ny tanjaky ny signal. Na dia tsy dia marina loatra aza izy ireo ary ny endrika dia manana endrika Retro. Ny avo kokoa dia ny vokatra tsara kokoa ho azontsikaKoa satria ny fandrefesana dia avy amin'ny 0 ka hatramin'ny -100, ny akaiky kokoa ny aotra dia ny tsara kokoa ny hamafiny.
La mamaky tabataba: manao ny mifanohitra amin'izay, kely kokoa no tsara. Ny sanda optimum dia eo anelanelan'ny -70 sy -100.
Farany, ny tsipika mena no mamaritra ny signal-to-feo feo: Izay mihoatra ny 25 dia fifandraisana matanjaka.
Farany, azonao atao ny manangona ny diagnostika anao foana raha te hahita azy ianao ary manadihady ny fanovana nataonao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Tsy mandeha ve ny tamba-jotra Wi-Fi anao? Ny rindranasa amin'ny Mac anao dia manampy anao hahita ny vahaolana
Ataoko izay lazainao ary mahazo rakitra miaraka amina extension extension log eo amin'ny birao izay tsy azoko atao ny mandika.
Pau Pujol Nolla dia hoy izy:
Ny mac-ko tsy hifandray amin'ny tp-link 8970 fa mampiasa fidirana fidirana
Valiny tamin'i Pau Pujol Nolla
Tahirin-kevitra fitaterana bebe kokoa amin'ny Apple Maps, amin'ity indray mitoraka ity ho an'ny San Diego sy British Columbia
Ity ny Skoogmusic's Skoog 2.0 ho an'ny Mac, fomba iray hafa amin'ny famoronana mozika